Gudhis oo gumaysiga lagaga dilay saraakiil sarsare & Waraysi aan la yeelanay nin kusugnaa deegaas uu dagaalku ka dhacay.
Dad badan oo Qabridaharre dhawaan lagu xidhxidhay.
Askari Itoobiyan ah oo isu dhiibay ciidammada xoreynta Ogaadeenya.
Mucaawino la gaadhsiiyay dad Dhoobley ku tabaalaysan.
Ururka Codka Nabada Ogadenya oo shirk u qabtay Maraykanka
Madaxwenaha S/Afrika oo Khudbad Xasaasi ah ka jeediyey shirka ururka AO oo ka dhacay Addis-Ababa.
Gudhis oo gumaysiga lagaga dilay saraakiil sarsare.
Wariyaha RX uga soo warrama dalka Ogaadeenya ayaa noo soo sheegay dagaal adag oo ka dhacay Gudhis, oo ka tirsan degmada Fiiq, kaasoo khasaare aad u wayn loogu gaystay ciidammada caga-jiidka ah ee gumaysatada Itoobiya.
Cutubyo ka tirsan ciidammada sida gaarka ah u tababaran ee xoreynta Ogaadeenya ayaa markii ay taariikhdu ahayd 26/01/07 waxay weerar ku qaadeen ciidammo ka socda gumaysatada Itoobiya oo hawlgallo millatari u yimid nawaaxiga Gudhis, waxayna weerarkaas si wayn ugu jabiyeen ciidammadii gumaysatada Itoobiya ee halkaas loo soo diray.
Weerarkan waxaa ciidammada gumaysatada Itoobiya lagaga dilay 45 askari, oo ay ku jiraan seddexdii sargaal ee isaga hooseeyay hooggaanka ciidammadaas, iyadoo mid ka mid ah saraakiishaas ay darajadiisu ahayd Gaashaanle.
Wuxuuna wariyuhu noo sheegay in sargaalkaas Gaashaanlaha ah jeebabkiisa laga soo saaray dukumintiyo muhiim ah iyo caddaymihiisii, kuwaasoo ay hadda gacanta ku hayaan taliska ciidammada xoreynta Ogaadeenya. Sargaalkan sare wuxuu xubin ka ahaa Golaha Dhexe ee Isbahaysiga EPRDF, wuxuuna ahaa taliyihii ciidammada gumaysiga ee Shaygoosh.
Waxaa sidoo kale ciidammada gumaysatada Itoobiya laga dhaawacay askar badan oo dhaawacoodii lagu daldalay diyaarad helikobtar ah.
Waxaa dagaalkaas ciidammada gumaysatada Itoobiya lagaga furtay 15 Qori, iyo qalab is-gaadhsiineed oo dhawr ah.
Ciidammadan ayaa markii jabkaas loo gaystay waxay ku gadoodeen, sidii caadada u ahayd dadwaynihii rayadka ahaa ee nawaaxigaas ka dhawaa, iyagoo dilay Alla ha u naxariistee Haybe Saaban, oo ahaa oday waayeel ah oo da�diisa lagu qiyaasay 80 jir. Waxay sidoo kale dhaawacyo soo gadhsiiyeen Mahad Rashiid Yogol iyo Abshiro oo magaceeda oo buuxa aan la haynin.
Wuxuu kaloo wariyuhu noo soo sheegay in markii ay taariikhdu ahayd 22/01/07 weerar lagu qaaday koox Dabaqoodhi ah oo la keenay Qooran, oo ka tirsan degmada Qabri-bayax, waxaana laga dilay 2, 5 kalana waa laga dhaawacay.
20/01/07 weerar gaadmo ah oo ciidammada xoreynta Ogaadeenya ay ku qaadeen kuwa cadowga eek u sugan Garigo�an, waxay kaga dileen 2 askari.
Xukuumadda gumaysatada Itoobiya ayaa 12/01/07 u soo dirtay magaalada Qabridaharre sargaal sare oo ciidammadeeda ka tirsan iyo calooshood u shaqaystayaal soomaali ah oo uu hormuud u yahay ninka lagu magacaabo Aaden Taani. Waxaana nimankan loo soo diray inay fuliyaan qorshe lagu cadaadinayo dadwaynaha rayadka ah ee ku dhaqan Qabridaharre iyo nawaaxigeeda.
Nimankaasi markii ay yimaadeenba waxay dadwaynaha Qabridaharre u qabteen shirar qasab ah, iyagoo dadka u sheegay in looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro ciidammada xoreynta Ogaadeenya, hase yeeshee dadwaynihii ayaa si cad ugu sheegay in cidda hawshaas looga fadhiyo ay yihiin ciidammada dowlada, dadwaynuhuna ayna wax shaqo ah ku yeelan karin, arrintaasoo si wayn uga cadhaysiisay sargaalkii hawshan loo soo xilsaaray iyo calooshood u-shaqaystayaashii la socday.
Iyagoo hadalkii dadwaynaha jawaab ka bixinayana waxay xabsiga u taxaabeen dadwayne rayad ah oo tiradoou 30 kor u dhaafayso. Dadka la xidhxidhay een magacyadoo helnay waxay kala yihiin;
1- Barre Cabdi Naasir
2- Ruqiya Maxamed Sulub
3- Sacda Sh Dayib
4- Canab Cabdi Adar
5- Muxubo Carab
6- Ardo Xaaji Aaqib
7- C/raxmaan oo magiciisa oo buuxa aanaan helin
8- Suleeqa Cabdi Adar
9- Hodan Nuur
10- Ilyaas Maxamuud Doolaal
11- Macalin C/rashiid
12- Kayse Aaden, oo ah guddoomiyihii hore ee degmada Qabridaharre
13- C/llaahi Doolaal, oo masuul ka ah waxa ay ugu yeedheen Horumarinta Reer-Miyiga
14- Hire Xasan Salaad, oo isaguna ah arrimaha nabadgelyada u qaabilsan mamul ku-sheegga degmada
15- Deeq C/llaahi iyo
16- Faadumo Xaaji Xuseen
Askari ka tirsanaa ciidammada gumaysatada Itoobiya ee ka hawlgala gobollada Ogaadeenya ayaa isu soo dhiibay ciidammada xoreynta Ogadeenya markii ay taariikhdu ahayd 24/01/07.
Askarigani wuxuu u dhashay qowmiyada Oromada, wuxuuna sheegay inuu ka tirsanaa Gaaska 32aad, gaar ahaan Kooxda 2aad ee Madaafiicda ee xarunteedu tahay magaalada Jigjiga.
Askarigan ayaa sheegay inuu ka soo goostay ciidammada gumaystada Itoobiya, ka dib markii uu u adkaysan waayay dhibaatooyinka xad-dhaafka ah ee lagu hayo dadwaynaha Ogaadeenya iyo kuwa Oromada. Wuxuu kaloo ku daray inuu ogaaday beentii ay xukuumadda EPRDF u sheegi jirtay ee ahayd in la soo qaqabanayo koox shufta ah oo dadka dhibta.
Askarigan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato halganka ay JWXO kula jirto gumaysatada Itoobiya, kaasoo uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu naftiisa u huro. Askarigan ayaa si wayn uga mahad sheegtay sida sharafta iyo walaalnimada leh ee loo soo dhaweeyay.
Markii ugu horraysay muddo bilk u dhaw ayay xukuumadda Kenya oggolaatay inay xadka NFD iyo Soomaaliya ka gudbaan baabuur wadda mucaawanooyin kala duwan oo loo wado dadka soomaaliyeed ee ka soo qaxay dagaallada xaqdarrada ah ee xukuumadda Itoobiya ka wado dalka Soomaaliya, kuwaasoo in muddo ahba ku tabaalaysanaa magaalada Dhoobley oo xadka ku taalla.
Daba-yaaqadii toddobaadkii hore ayay xukuumadda Kenya fasaxday baabuur wadda mucaawanooyin kala duwan oo ay bixiyeen hay�adaha Qaramada Midoobey iyo ururrada aan xukuumiga ahayn, kuwaasoo loo waday qoxootiga soomaaliyeed ee dar-xumada iyo rafaadku ku hayaan magaalada Dhoobley.
Qoxootigan ayaa muddaba halkaas ku xayirnaa, ka dib markii ay xukuumadda Kenya u diiday inay u gudbaan xerada qoxootiga ee Dhadhaab, oo in ka badan 160,000 oo u badan qoxooti Soomaaliya ka yimid ay ku jiraan, isla markaana ay hay�adaha gargaarkana u diiday inay u gudbaan dhinaca Soomaaliya, si ay dadkaas gargaar u gaadhsiiyaan.
Mucawanadan hadda Dhoobley la gaadhsiiyay ayay la sheegay inay isugu jirto 1760 bustayaasha lagu seexdo ah, 810 ah bacaha la dallaalimaysto iyo 1000 oo ah qalabka wax lagu karsado ama wax lagu cuno, waxaana alaabtaas bixisay Hay�adda UNHCR. Waxaa sidoo kale mucaawanadan ka mid ah Shandarawooyinka Kaneecada laga galo, Bustayaal, makiinadaha cuntada lagu karsado iyo saabuun, kuwaasoo ay bixiyeen Hay�adaha UNICEF iyo Oxfam.
Dagaalka waxshinimada ah ee gumaysatada Itoobiya ay ku soo qaaday dalka Soomaaliya daba-yaaqadii bishii Disember ayaa sababay inay guryohooda ka qaxaan dad gaadhaya 400,000, oo 6000 oo ka mid ahi ay u qaxeen dhinaca xadka Soomaaliya iyo gobolka NFD.
Hay�ado badan oo kuwa gargaarka ah ayaa ka cabsaday inay shaqaalohooda u diraan dalka Soomaaliya, ka dib markii ay soo gaadheen wararka sheegaya in ciidammada Itoobiya ee qabsaday dalka Soomaaliya ay si ba�an u xasuuqaan dadwaynaha, isla markaana qaar badan oo ka mid ah ay xabsiyada u taxaabaan.
Ururka Codka Nabada Ogadenya oo shir ku qabtay maraykanka.
Magaalada Mineanpolis ee cariga maraykan ka ayaa waxaa sabtidii lagu qabtay shir uu soo abaabulay ururka loo yaqaan codka nabadda ee dhulka Ogadenia.
Shirkan oo ay ka soo wada qayb galeen dhamaan ururada bulshada Ogadenia, sida ururka Hooyooyinka, jaliyadda ogadenya ee Minnesoto, oday-dhaqameedyada ogadenia iyo dadweyne kala duwan ayaa wuxuu isugu jiray warbixino qoto dheer oo ay soo gudbiyeen madaxda ururka, iyo wacyigalin ay soo bandhigeen qaar ka mid ah oday-dhaqameedyadii iyo hooyooyinkii isugu yimid Madasha shirka.
Maxamed Sheikh & Axmed Carab oo ah aasaasayaashii iyo madaxdii ururkan ayaa si qoto dheer uga warbixiyey taariikhda ururkan, marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray muddadii uu jiray, kulamada kala duwan ee ay la yeesheen qaar ka mid ah madaxda ugu saraysa waddanka maraykanka & sida ay lama huraan u tahay in halganka qalinka & qayladu ay yihiin laf dhabarka horumarka umad baadigoob ugu jirta xaqooda aayo ka tashi.
Madaxda ururkan ayaa waxay aad ugu nuuxnuuxsadeen arimaha ay ka midka yihiin:_
1- Baahida weyn ee loo qabo in xidhiidh diplomaasi oo joogto ah lala yeesho aqalka cad ee waddanka maraykan, hay�aadka u ololeeya xuquuqda aadamaha & wasaaradda arimaha dibadda ee maraykankana (State Department).
2- In warbixin joogto ah & bandhig ku saabsan qaddiyadda Ogadenia la hor geeyo dhamaan cid kasta oo ay khuseyso gaar ahaan Senetorska waddanka Maraykan ka, sharci-dajiyaashiisa & xildhibaanada ka tirsan aqalka cad iyada oo Madaxda Ururkan (Ogaden Voice for Peace) ay bulshaweynta Ogadenia ee Carrigan ku sugan ay ka qaadi doonaan waxyaabo muujinaya dareenkooda ku aaddan mashaakilaadka umaddooda haysta sida in muwaadinka reer Ogadenia laga qaado saxiixiisa, cinwanakiisa & fariinta uu doonayo inuu u gudbiyo aqalka cad ee waddanka maraykanka.
3- iyo inay lama huraan tahay midaynta bulshada soomaalida Ogadenia si wadajirnimo loogu raadiyo xornimada iyo xaqa aaya-katashiga somalida Ogadenya.
Sidoo kale waxaa madasha shirka lagu soo bandhigay cajalado maqal & muuqaalba leh oo laga soo duubay shirkii kan la midka ahaa ee kal hore lagu qabtay xarunta nabadda & caddaalada ee Magaalada Sandiego, oo ay dadweynihii si duuduub ah u wada iibsadeen, iyo weliba waraaqo ay ku qornaayeen Baaq cabasho ah kuna socday Senatorska aqalka cad oo iyana ay bulshadu dhamaan ku wada saxiixeen magacyadooda & cinwaanadooda !
Gabagabadii shirka ayaa ahaa mid kusoo dhamaaday jawi & saansaan wanaagsan isla markaana xanbaarsanaa Iftiin cusub wuxuu ururku runtii ku beeray bulshadii madasha joogtay yididiilooyin hor leh, kalsooni dheeraad ah iyo in si wada jir ah loogu guntado halganka qalinka & qaylada ku salaysan ee looga baahan yahay muwaadin kasta oo Ogadenia ka yimid!
"Soomaaliya waxay u baahantahay isku duubnida Afrika"
Madaxweynaha wadanka Koonfur Afrika Mudane Thabo Mbek ayaa qudbad dheer ka jeediyey kulankii Madaxda AU ee ka dhacey Magaalaad Adis Ababa , qubadiisa oo meelo badan taabaneysay ayuu ku bilaabey in "Soomaaliya u baahantahay isku duubnida Afrika"
Madaxweyne Thabo, wuxuu sheegay in bishii June ee sanadkii 1974 ay isaga iyo xubno kale ay maalmo ku sugnaayeen Caasimada Soomalaiya ee Muqdisho iyaga oo qayb ka ahaa wafti ka socdey Ururka ANC. Kuwaas oo caasimada Soomaaliya u yimid in ay kaga qaybgalaan shir sanadeedkii Madaxweynayaasha Qaarada Afrika oo ka dhacayey Muqdisho.Sida ay Caadadu ahaan jirtey wuxuu shirku shir gudoomiye u doortey Madaxweynihii Soomaaliya Major Genaral Maxamed Siyaad Bare si uu u hogaamiyo shirka, ayuuu yiri Mudane Thabo.
Xiligaas bishii June ee shirku socdey waxay Muqdisho ahayd goob dabaal deg aad u weyn oo Afrikaanimo ka socotay. Sababta dabaaldegaas oo ahaa burburkii gumeysiga boortaqiiska iyo Xoreyntii wadamadii uu boortaqiiksu gumeysan jirey. Xidiga maalintaas ee aan su'aasha laga keeni karin ee ka soo qaybgaley kulankaas wuxuu ahaa SAMORA MACHEL oo noqdey Madaxweynihii u horeeyey ee wadankii xoroobey ee Mozambique.
Bishii June 24, 1974 Wargeyska US Time ayaa qorey qormo uu ugu magacdarey "Degitaankii (Quusidii) Lusitania" iyo waxyaabo kale. Hadaba, markii Madaxweyne Antonio de Spinola loo mgacaabey Madaxweynaha Angola iyo Mozambique, qudbadiisii u horeysay ee uu ka jeediyo meel dadweyne isagu yimid, waxa uu ku hadley, weedhii ama ereyadii ay ka sugayeen Afrikanku in uu ku hadlo. Wuxuuna yiri " Aayo-katalinta lagama saari karo Dimoqraadiyada, sidoo kale Aayo-katalinta lagama saari karo Madax-banaai"
Isla kulankaas waxaa hadalo kulul ka soo jeediyey Madaxweyne ku xigeenkii Frelimo oo lagu magacaabi jirey Marcelino dos Santos (Marsalino) oo ku dhawaaqey "Weerarkayaga waan joogteynaynaa, wanaan xoojineynaa ilaa aan xornimo ka helo"
Hadii ay jiraan dad caad ka saarraa xornimo u dirirkii ka soo horjeeday Boortaqiiska, Ururka ANC wuxuu ahaa mid aanan qabin fikirkaas. Warqad ay ANC u qortey Xoghayihii shirka lagu doortey ayaa waxay ku sheegtay'. "In caalamka guud ahaan xoogagii rajciyada aad looga guuleystey, Dadweynaha Afrika iyo aduunka jecel Xoriyada, nabada iyo Horumarka dhaqan dhaqaale ayaa waxay soo hooyeen guulo la taaban karo", tusaale ahaan dadka walaalaheen ah ee Afrika, sida, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau iyo Cape Verde oo dhamaantood iska dul qaadey gumeysigii la nacey ee Boortaqiiska.
Madaxweyne Thabo Mbek, waxa uu yiri xiligaas ayey ahayd markii iigu dambeysay Soomaaliya, sanado badan kadibna ilaa hadadan xasuusteytayada kama bixin in Soomaliya ahayd meel rajo afrikanimo noo leh, goob la isku lahayn karo oo Afrika lagu xoreyn karo, oo aan anigu ku jiro sidii aan Midabtakoorka uga xoroobi lahayn. Mudo kadib, qaar ka mid ah halgamayaashayadii ayaa waxa ay ku noqdeen dawladii Soomaliya, si ay halkaas uga furtaan saldhig qarsoodi ah oo ay kaga soo galaan Koonfur Afrika kadiriyiintayadii Umkhonto we Sizwe, kuwaas oo Midabtarkoorki Koonfur Afrika ka soo geli jirey dhinaca bada iyaga oo ka imanaya dekedaha Soomaaliya.
Si kastab aha ahataee, Soomaliya waxay kala daadatey waxayna noqotey meel aan dawlad ka jirin, taas oo keentay in ay noqoto Ajendaha ugu weynee Afrika ee bilowga sanadkan 2007, halkii sanadkii 1974 ay kulankii Afrikanku ahaa Xoreyntayada iyo Afrikada kale, kuwaas oo soomalaiya garab ka haystey. Sanadka 2007 Soomaliya waxay u bahaan tahay taageerada Afrika
Madaxweynaha Koonfur Afrika mar uu ka hadlayey taariikhda Soomalaiya, waxa uu sheegay in Soomaliya xornimo qaadatey sanadkii 1960-kii, isaga oo sheegay in labadii Gobol British iyo Italian Somaliland ay xoroobeen. Hadaba si ay labadaas Gobol u dhameeyaan kala qaybsanaantii uu Gumeysiga Soomaaliya kala qoqobey ayey labadaas Gobol isu tageen, isla markaana dhalatey Dawladii Soomaliya.
Talaabadii isku darsanka dadka ku hadla Afka Soomaliga, waxa ay dhalisay xiisad ka aloonsatey wadamadii dersika ahaa sida Itoobiya iyo Kenya oo labadaba ay degenyihiin dad soomaaliyeed. Xiisadii ugu xumeydna waxay dhexmartey Soomaliya iyo Itoobiya sanadkii 1977, kadib markii Soomaaliya iskudaydey in ay qabsato dhulka ay degenyhiin Soomaalida Ogadeniya. Dhulkaas oo ay Itoobiya qabsatey qaybo ka mid ah sanadkii 1880-meeyadii, halka dhulka intiisa kalena ay kula wareegtey hesiish dhexmaray Itoobiya iyo wadanka Ingriiska.
Mudane Thabo Mbek, waxa uu yiri sababta aan taariikhdan u soo hadal qaadney waxa ay tahay, waxaa jira Ciidamo Itoobiyaan ah oo Soomaaliya ku sugan, taas oo aan ahayn wax lala yaabo in Warbaahinta qaar ku tilmaamaan joogitaanka Itoobiya ee Soomaliya liidnimo ama bahdilid loo geystey Soomalida, sida nin ganacsade ah oo lagu magacaabo Abdulahi Mohamed Mohamud laga wariyey, waxaan ka cabsi qabnaa dagaal aad u dheeraada, dadkuna aad ayey uga xanaaqsanyihiin Ciidamada Itoobiya.
Madaxweyne Thabo Mbeki qudbadiisa oo aad u dheereayd waxa ka mid ahaa gabagabadii inuu yiri "Waqtiga ayaa inoo sheegi doona xiliga dambe ee Hogaamiyaasha iyo Madaxweynayaasha ay ku kulmi doonaan shirka AU oo ka dhaca Muqdisho. Hadaba si ay taasi u dhacdo, hadii aynu nahay Afrika waa in aan la nimaadnaa hab aynu kaga gudbeyno dhibaatootooyinkii hore ee taariikheed iyo kuwa hada cusub ee Soomaaliya ka dhigey dhibaato ka mid ah kacdoonkii Afrika oo aan weli la xalin, halka ay ka xorowgii gumeysigii Boortaqisku uu u ahaa kacdoon Afrikan oo aan la xalin sanadkii 1974
Ugu dambeyntii Madaxweyne Thabo Mbeki waxa uu yiri. "Hadii aynaan shiishka saarin oo aynaan la iman wada xaajood ku dhisan xadaarad ama ilbaxnimo horseeda nabad iyo xasilooni ka dhex-dhalata qabaa'ilada, qoomiyadaha wadaaga hal wadan, dawladaha dhexdooda iyo wadamada isu tagey, si aysan u dhicin arinta Soomaliya ka dhacdey oo kale.
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 30, 2007